Olole Nadaafadeed oo ka socda degmada Warta Nabadda “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Olole Nadaafadeed oo ka socda degmada Warta Nabadda “SAWIRRO”
Guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka banaadir Jawaahir Baarqab oo uu wehliyo Guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee Degmada Warta nabadda ayaa maanta howlo kormeer ah ku tegay isgoyska xararyaalle ee degmada, halkaasi oo ay ka socotoy olole nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicdii ay lahayd degmada Warta Nabadda.
Jawaahir iyo xubnihii la socday ayaa waxa ay u jeedka socdaalkooda la xiriirtay u kuur gelidda sida ay u socoto ololaha nadaafadeed ee ay ku howlanaayeen haweenka degmada Warta Nabadda, waxaana ay ka warbixiyeen xaaladaha ay ku shaqeeyaan, iyagoo qaadayay suugan ka turjumeysa in bulshada looga fadhiyo ka qeyb qaadashada nadaafada.
Guddoomiye ku-xigeenka degmada Warta Nabadda Maxamed Cabdi Axmed oo goobta hadal kooban ka jeediyay ayaa ku amaanay haweenka doorka ay ka qaataan dib u soo celinta bilicda degmada, isla markaana habeen iyo maalin ay u taaganyihiin ka qeyb qaadashada ololaha nadaafadda.
Guddoomiyaha ururka Haweenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab ayaa xustay in haweenka ay si iskaa ah uga shaqeeyaan nadaafadda, isla markaana ay taariikhda xusi doonto, waxaana bulshada inteeda kale ay ka codsatay inay ka qeyb qaataan oloha nadaafadda ee dib bilicda loogu soo celinayo caasimadda.
Ololaha nadaafadeed ee ka bilowday degmada Warta Nabadda ayaa qeyb ka ah dadaallada uu maamulka gobolka banaaadir ugu jiro in la soo celiyo bilicdii ay lahayd magaalada.
Allaha u naxariistee Xildhibaan Maxamed Axmed oo loo sameeyay aas Qaran
Wasiirka Amniga gudaha oo Muwaadiniin Iraan ah ku wareejiyay madaxda safaaradooda ee Muqdisho